Chiremera: Chinhu Chinoshayikwa cheZvakawanda Zvirongwa Zvekuita | Martech Zone
Muvhuro, April 4, 2016 Chipiri, April 5, 2016 Douglas Karr
Hapana vhiki rinoenderera mberi Martech Zone kuti isu hatisi kudzora nekugovana vamwe vanhu chokwadi, maonero, makotesheni, uye kunyange zvirimo zvavo nenzira ye infographics uye zvimwe zvinyorwa.
Isu hatisi nzvimbo yekumisikidza yevamwe vanhu zvemukati, zvakadaro. Kugovera pfungwa dzevamwe vanhu hakuite kuti uve chiremera, kunoona uye kunosimbisa chiremera chemunyori. Asi… kusimudzira, kutsinhira, kutsoropodza, kuenzanisira uye kutsanangura zvirinani zvemukati mevamwe vanhu kwete chete kuziva nekusimbisa masimba avo… zvinowedzerawo zvako.
Kana ini ndikawana zvemukati online izvo zvakakosha kune vateereri vedu, ndinotora nguva yekunyatsoiongorora uye nekupa ruzivo rwandinoziva kuti vateereri vangu vanozokoshesa. Hazvina kukwana, semuenzaniso, kushambadzira iyo infographic iyo mumwe munhu akagadzira. Ini ndinofanira kugovera iyo infographic uye nekupa kunyatso kuiongorora iyo yakasarudzika uye zvinzvimbo my expertise
Tsanangudzo: Hunhu hwechivimbo hwemunhu anoziva zvakawanda nezve chimwe chinhu kana anoremekedzwa kana kuteererwa nevamwe vanhu.
Maererano nedudziro iyi, pane zvitatu zvinodiwa kuti uve nechiremera:
Hunyanzvi - munhu anoziva zvakawanda uye kufumura zvavo ruzivo.
chivimbo - munhu anotenda zvavo ruzivo pavanorugovana.
ndangariro - dzimwe nyanzvi dzichiona hunyanzvi hunoratidzwa nemunhu zvine chivimbo.
Kugadzirisazve pfungwa dzevamwe vanhu dzepakutanga hakuzombokuita iwe chiremera. Kunyangwe zvingaratidza kuti une hunyanzvi, hazvipe chero kunzwisisika mukuvimba kwako. Zvakare hazvizokonzere kuti uzive vezera rako.
Chiremera chakakosha parwendo rwevatengi nekuti vatengi nemabhizinesi vari kutsvaga hunyanzvi hwekuvabatsira uye kuvazivisa nesarudzo yavo yekutenga. Zvichitaurwa zviri nyore, kana iwe uchidzokorora mumwe munhu, mutengi anozoona iyo yekutanga sosi seye anozivikanwa mvumo - kwete iwe.
Kana iwe uchida kuzivikanwa seane chiremera, ive chiremera. Iwe hausi kuzoita izvozvo nekumira kumashure kwevamwe vanhu mazano. Taura ako akasarudzika maonero. Edza uye tsigira mazano ako nekutsvaga uye zvinyorwa. Wobva wagovana iwo mazano kune ese maindasitiri masaiti anokutendera iwe kutora chikamu. Muparidzi wega wega anogara achitsvaga iyo yakasarudzika maonero - iri nyore pani.
Mhedzisiro yekugovana hunyanzvi hwako ndeyekuti iwe parizvino uri parutivi nevezera rinotungamira muindasitiri yako, usinga regedzerwa sezvaunomira kumashure kwavo. Sezvo iwe uchivaka kuzivikanwa uye nechivimbo uchigovana hunyanzvi hwako, iwe uchaona kuti iwe uchavimbwa uye kubatwa zvakasiyana zvakasiyana. Vezera rako vanozokuziva uye vagovana zvaunopa iwe zvauri kupa.
Uye kana iwe ukaonekwa sechiremera, kukurudzira danho rekutenga kunova nyore.
Tags: simbachivimborwendo rwevatengitsananguro yechiremerahunyanzvivezerakuonekwa